သတိထားစရာ Omicron ပြဿနာ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သတိထားစရာ Omicron ပြဿနာ
ကိုဗစ်-19 ရဲ့ ပျံ့နှံ့ မှုတွေပြီးတဲ့နောက် သတိထားလာရတဲ့ မတူမျိုးကွဲ ဗီဇပြောင်း Omicron ဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကူးဆက်လာတာဟာ အခုဆိုရင် အရှေ့တောင်အာရှထဲ ခြေဆန့်ပြီး ပြည်တွင်းကူးဆက်မှု transmission တွေစတွေ့လာပါပြီ….
အဆိုပါ ဗီဇပြောင်း အိုမီခရွန်လို့ ခေါ်တဲ့ Genre ပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နိုဝင်ဘာ အစောပိုင်း ၂၀၂၁ ကစပြီး အာဖရိက မှာစတွေ့တာလို့ (WHO) ရဲ့ ဖော်ပြချက် မှာဖော်ပြထားတာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါဆို ကူးစက်မှုတွေဖြစ်နိုင်လို့ ဘာတွေသတိထားရမယ် ဘာတွေကိုလိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမယ် ဆိုတာလေးကို
Omicron မျိုးကွဲဟာ အခြား ဗီဇပြောင်း Delta Variant တို့လို မျိုးဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ ဘာတွေ ကွာခြားလဲ ?
Omicron က အခြားသော Delta တို့လို မျိုးကွဲ ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ မတူပဲ ကွဲထွက်နေတဲ့ အချက်တွေက အမျိုးပေါင်း (၅၀) လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါက အခြား ကြုံဖူးနေကြ Variant တွေထက်များစွာပိုနေတာပါ။
Delta Variant ကိုတွေ့ကြုံခံစားပြီးနောက် သိလာတာက Delta က ကူးစက်မှုနှုန်း မြန်ဆန်တယ် တစ်ကယ်ဖြစ်လာရင် ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ကြောက်တတ်ကြတယ်။ ဒါဆို အခုကြုံတွေ့ နေရတဲ့ Omicron ကရော ကူးဆက်မှုနှုန်းမြန်ဆန်ပေမယ့် ဝေဒနာကို ပိုပြီးခံစားရတာလား Delta လောက်မပြင်းထန်ဘူးလားဆိုတဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကတော့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတုန်းပါပဲ…
Omicron Variant နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မသိရသေးတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ ?
ဘယ်လောက်မြန်မြန် ကူးစက်နိုင်တာလဲ ?
အရင်တုန်းက ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်တွေလိုပဲ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ ရှိလား ?
ကိုဗစ် နာတာရှည် ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်လား ?
အခြား မျိုးကွဲတွေနဲ့ ရော ရောဂါလက္ခဏာ ကွဲပြားနိုင်သလား ?
Omicron ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါလက္ခဏတွေကို ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေက ဗိုင်းရပ်အပေါ်မှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေလဲဆိုတာ ကိုကျွမ်းကျင်သူ အများစုက မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပိုမိုတိကျတဲ့ အဖြေရနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပြီး စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ ထိုးပေးနေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ Omicron ကို ကာကွယ်နိုင်လား ?
လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေက အခြားသော မျိုးကွဲတွေလိုပဲ ဆက်လက်လိုအပ်နေသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ယခုလက်ရှိထိုးတားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေက ဘယ်လောက်ထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အစောပိုင်း စမ်းသပ်ချက်များ အနေနဲ့ကတော့ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရလာဒ်ကောင်းများကို တွေ့ရပါတယ်။
Booster တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ခုခံကာကွယ်မှု စနစ်ကို (၂၅ဆ) တိုးပေးတာဖြစ်ပြီး Pfizer ရဲ့ အစောပိုင်း စမ်းသပ်ချက် အချက်အလက်တွေ အရတော့ ပထမ ဆေးနှစ်လုံးထိုးထားတဲ့ သူတွေမှာတောင် Omicron variant ကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်မှုမှာ အားနည်းနေသေးတယ်လို့ ထုပ်ပြန်ထားပါတယ်။ Booster တွေကလည်း ၂၅ဆ ပိုတိုးသင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ အခြား Moderna နဲ့ Johnson & Johnson ထိုးဆေးတွေကတော့ Omicron ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှတော့ ထုပ်ပြန်ချက် မရှိသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။
⚒️ Omicron Variant ရဲ့သိသာတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ အနေနဲ့ကတော့
👉မောပန်းလွယ်မယ်, ကိုယ်လက် နာကျင်ကိုက်ခဲမယ်
👉ခေါင်းကိုက်မယ်, အနံ့နဲ့ အရသာ ပျောက်ဆုံးမယ်
👉လည်ချောင်းတွေနာမယ်, နှာစေးမယ် နှာခေါင်းတွေပိတ်မယ်
👉အော့အန်ခြင်း ဖြစ်မယ်, ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော စတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့
🎗️ အောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြလာရင်တော့ မဖြစ်မနေ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ကုသဆောင် တို့မှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီး စောင့်ရှောက်ကုသမှု ခံယူပါ‌။
👉ရင်ဘတ် မခံမရပ်နိုင်အောင် အောင့်ခြင်း
👉အသားအရောင်အလိုက် ဖြူဖျော့လာခြင်း, အရည်ပြား နှုတ်ခမ်းနှင့် လက်သည်းခွံများ ပြာနှမ်းလာခြင်း
စတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ကုသဆောင် ကို အမြန်ဆုံး သွားရောက် ပြသသင့်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဖော်ပြထားသော ရောဂါ လက္ခဏာများသည် ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု မဆိုနိုင်သေးပါ။ မိမိကိုယ်တွင် သံသယ ဖြစ်စရာအချက်များ တွေ့ရှိလာပါက နီးစပ် ကျွမ်းကျင်ရာ ဆရာဝန်များထံမှာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
myDoctor ရဲ့ အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်များမှ တဆင့် ကိုဗစ် ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးလိုပါက
အိမ်တိုင်ရာရောက်လာ ခေါ်ယူစစ်ပေးနိုင်သလို သက်ဆိုင်ရာ ဆေးခန်းမှာလည်း လာရောက်စစ်ဆေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး နှင့် Booster ထိုးချင်သူများ အတွက်လည်း myDoctor Facebook page ရဲ့ message box မှာ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပတ် ချန်ထား၍ဖြစ်စေ….
myDoctor Customer-Care ဖုန်းနံပတ် သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါတယ်။
🤙 ဆက်သွယ်ရန် >>> 09 977 835 686 <<<
မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားများ ကပ်ရောဂါဘေး အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပြီး ကိုယ်စိတ်၊ နှစ်ပါး ချမ်းသာကြပါစေ
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့ နည်းပညာက ဘယ်လိုနေရာကနေ ပါဝင်နေလဲ